IiNdaba zoLondolozo lweeNdaba
Udidi: kwama Press
I-Kawai Shiba-Eyona projekthi iMvuzo ye-Crypto Meme okwangoku!
U-Kawai Shiba usungula into eza kuba yeyona projekthi ye-crypto ye-meme entsha ebonelela ngengeniso engenzi nto kubanini bethokheni ngokunikezela ngemivuzo ye-BUSD!
Yintoni eyenza iKawai Shiba ibe yodwa? Luphawu lwememe olubonisa i-6% ye-BUSD kunye nenye into enebango elizenzekelayo elibuyisela abanini kwiyure nganye. Bonke abanini kufuneka benze ukufumana iBUSD ngokuzenzekelayo kukugcina iithokheni zeKawai Shiba kwizipaji zabo!
Yintoni iKawai Shiba?
Kawai Shiba yingqekembe yemali esebenza njengomgaqo ozimeleyo ovelisa amandla okuhlawula amatyala kunye neprothokholi yokulima isivuno esizimeleyo. Ukuqaliswa kwi-Binance Smart Chain (BSC), i-Kawai Shiba yiprojekthi ye-cryptocurrency ye-meme ebonelela ngeenzuzo ezininzi kumsebenzisi ngokubonelela ngeempawu ezikhethekileyo ezifana nomvuzo wemihla ngemihla we-BUSD kubo bonke abanikazi bamathokheni. Abanini-zabelo baya kuba nakho ukufumana ingeniso ye-BUSD ngenxa yendalo entsha yeprojekthi apho umthamo wemarike ozinzileyo uya kuqinisekiswa.
Okwangoku, i-Kawai Shiba inabanikazi be-2000, i-31 yeebhiliyoni ezitshisa amathokheni, kunye ne-market cap ye-500,000 yeedola. Kuya kubakho ukuhanjiswa kwakhona kwe-6% kwi-BUSD phakathi kwabanini balo lonke utshintshiselwano lwamathokheni. Abanini kufuneka babambe ubuncinci beempawu ze-200,000 ukuze bakwazi ukufumana umvuzo.
I-6% eyongezelelweyo iya kufakwa kwintengiso kwi-BUSD - itshintshwe nge-BUSD ngexesha langempela. Ukuze udale umgangatho wexabiso, i-3% yentengiselwano iya kuguqulwa ibe yi-liquidity ye-Pancakeswap ngokuzenzekelayo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-tokenomics, nceda undwendwele mhlophe.
Indlela yokuthenga iKawai Shiba?
Yenza i-Wallet ye-MetaMask - abasebenzisi banokwenza i-MetaMask nge-desktop pc okanye i-iOS / isixhobo se-Android okanye i-TrustWallet. Ukulandela oko, abasebenzisi kufuneka bongeze i-Binance Smart Chain kuluhlu lwabo lwenethiwekhi. Oku kuya kuvumela abasebenzisi ukuba bathenge, bathengise, bathumele, kwaye bafumane iKawai Shiba ($KSHIBA). Ukufumana iingcebiso zenyathelo ngenyathelo, ndwendwela i tutorial.
Thumela i-BNB kwi-Wallet yakho - Kutshintshiselwano thenga i-BNB (okt Binance, Hotbit, Coinbase njl.). Amathokheni kufuneka adluliselwe kwidilesi ekhethiweyo ye-wallet ye-MetaMask. Inombolo yokuqala yedilesi ye-BEP-20 ithi "0x." Xa utshintshisa nge-BNB, abasebenzisi kufuneka baqinisekise ukuba basebenzisa inethiwekhi ye-BEP-20.
Qhagamshela iWallet kwiPancakeSwap - Yiya kwiPancakeSwap kwaye ujonge iKawai Shiba ($ KSHIBA) ngokucofa apha. Misela umda wokutyibilika ukuya kwi-12-15 % enokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokuxhomekeke kwimfuno.
Ukutshintsha i-BNB ku-Kawai Shiba, kwaye Bamba - i-BNB kufuneka itshintshwe nge-Kawai Shiba. Ukujonga iKawai Shiba, abasebenzisi kufuneka baqale bayongeze kwiMetaMask (tutorial) okanye Trust Wallet. Nje ukuba i-BNB ilungile, abasebenzisi banokuqala ukutshintsha! Ngenisa idilesi yomqondiso okanye uyikhangele kuluhlu lweethokheni ngokucofa "Khetha ithokheni."
Ikamva likaKawai Shiba libandakanya uphicotho-zincwadi kunye noqinisekiso lweCertik, ukuthengwa kwamakhadi ebhanki, kunye nokufikelela kwi-1 yesigidi semalike yemarike ngexesha lesigaba sesi-2 sodwa!
Ngolwazi oluthe kratya malunga neKawai Shiba, nceda undwendwele website!
Igama Company: Kawai Shiba
Inkampani yewebhu: https://kawaishiba.com/
I tilegram: https://t.me/KawaiShiba
NgoNovemba iKick Ecosystem ityhila uPhuculo lweKickRef V2
Ukuhlaziywa: 5 Novemba 2021
uphuculo I-KickEX lutshintshiselwano olukhula rhoqo lwe-cryptocurrency, okwangoku ekhuthaza urhwebo lwamabala njengoko iqonga lisemncinci kwaye likhula. Ezona mpawu ziphambili zibandakanya isicelo esiphathwayo, inkxaso enkulu yabathengi, imbuyekezo yokuthunyelwa, iintlawulo zekhadi letyala, nokunye okuninzi.
Uphawu lwendalo lweKickEX luphawu lwe-$KICK. Ngaphandle kokurhweba, i-$KICK ingasetyenziselwa iinkonzo ngaphakathi kwe-ecosystem ye-Kick. Njengoko uluntu lwe-KICK lukhula kwaye njengoko umthamo wokurhweba we-KickEX ukhula, imfuno ye-KICK yamathokheni iyanda ngokunjalo.
I-$ KICK luphawu lwe-deflationary. Amathokheni e-$ KICK atshiswa kuyo yonke intengiselwano eyenziwa kwinethiwekhi, ukunciphisa unikezelo kunye nokwandisa ixabiso le-$ KICK. Abo babamba i-$ KICK abanako ukuthambekela ekunciphiseni ukubamba ekubeni kuphela inxalenye yamathokheni asetyenziswe kwiintengiselwano zitshiswa.
Njengomqondiso wotshintshiselwano, i-$ KICK inceda kwakhona ekwandiseni i-liquidity ye-KICK ecosystem, kwaye inokunceda kulawulo lwenethiwekhi.
I-KickRef yenye yeenkqubo ezintsha zokudluliselwa kwi-maret. Iye yanda ekudumeni kwiiveki zamva nje njengoko ibonelela ngezona nkonzo zibalaseleyo zokuthunyelwa. Nokuba ungumrhwebi oyingcali okanye umntu osanda kuqalisa ukufunda malunga ne-cryptocurrencies, iKickRef inika wonke umntu ithuba lokuvelisa inzuzo.
Wonke umsebenzi ofunekayo kwiKickRef kukubhalisa nokuthumela abantu abaninzi kuthungelwano. Okukhona umsebenzisi ebhekisa ngakumbi, kokukhona iingeniso ezingakumbi umntu anokuzuza. Intsingiselo apha kukuba iKickRef ikhuthaza intsebenziswano yoluntu phakathi kwabasebenzisi bayo. Le yindlela esebenzayo yokufumana imali kunye nokunxibelelana nabantu, ngelixa kwangaxeshanye inceda ekuphuculeni inkqubo yendalo.
UPhuculo lweKickRef V2
Uhlaziyo olutsha lwe-Kick Referral luza kunye notshintsho kunye nokwenza lula kwamanyathelo azakunceda inkampani kunye nabasebenzisi bayo. Ngelixa inani lamanqanaba liza kuba sezantsi kwaye ukuntsonkotha kwamanyathelo kuya kwenziwa lula, abasebenzisi baya kukwazi ukuphinda kabini umvuzo wabo kwi-ecosystem. Olu tshintsho aluyi kuba nanxaxheba kwi-50% yengeniso yotshintshiselwano ye-KickEX evela kwiintlawulo zabasebenzisi.
Uhlaziyo luya kukhokelela ekwenziweni lula kwezi nkqubo zilandelayo:
Amathokheni okuthunyelwa kwe-KICK aya kutshintshwa ngokupheleleyo ngamanqaku oMvuzo (i-$ RP) ukususa ukudideka phakathi kwabo kunye namathokheni e-KICK. Ngenxa yoko, iithokheni zesipho ezininzi ziya kususwa, ngaloo ndlela kwandisa imfuno yeethokheni ze-KICK zokusebenzisa i-25% isaphulelo kwiifizi zokurhweba.
Bonke abasebenzisi abanamathokheni okuthunyelwa kwe-KICK kufuneka bawachithe okanye bathenge i-KICK kwiimarike ngaphambi kokukhululwa okuzayo kuba iithokheni zokuthunyelwa ziya kutshatyalaliswa ngomhla wokuqala kaNovemba.
Iimpawu zokuthunyelwa kwe-KICK yomsebenzisi ziya kutshintshwa zibe ngamanqaku oMvuzo (i-$ RP) ukuba zinikezelwe kukhuphiswano kunokuba zibe ngumvuzo wokubhalisa.
Ngaphandle kwamalungu esangqa somsebenzisi abe ngabarhwebi, abasebenzisi banokufumana amanqaku oMvuzo (i-$ RP) ngokuwafumana njengemali yokubuyisela imali emva kokuthenga i-KEX kwi-KickEX exchange.
Abasebenzisi abahlawula iikhomishini zabo zorhwebo kwiiNqaku zoMvuzo (i-$ RP) baya kufumana isaphulelo se-25%. Ngaphezu koko, amathokheni e-KICK angasetyenziswa nokuba umsebenzisi akanawo nawaphi na amaPhuzu oMvuzo ($ RP). Ngokujonga nje ukhetho "Hlawula iikomishini kwi-KICK", isaphulelo esifanayo siya kunikwa!
Kunokuba amanqanaba alishumi, inkqubo yokudluliselwa ngoku inesine, nto leyo eyenza kube lula ukulawula kunye nomvuzo ngakumbi kubathengi kuba kukho amanqanaba ambalwa kodwa ipesenti ephezulu yembuyekezo. La manqanaba alandelayo amisela iintlawulo:
Inqanaba loku-1: 20%
Inqanaba le-2: 15%
Inqanaba lesi-3: 10%
Inqanaba lesi-4: 5%
Ikhomishini yokurhoxiswa kweemali zokudluliselwa iya kuba simahla.
Kwiidiphozithi ezenziwe ngokuthunyelwa, abasebenzisi baya kufumana amanqaku oMvuzo (i-$ RP).
Abasebenzisi baya kufumana i-staking share kwi-level 1 yokuthunyelwa okumenywe ngumsebenzisi ngokukhawuleza emva kokuba uphuculo luqalise ukusebenza, kunye ne-5% yemali yokuthunyelwa kwe-referral efunyenwe kumsebenzisi yonke imihla njengebhonasi ye-staking. Okwangoku, iimali ze-KICK, KISHU, kunye ne-SAFEMOON zamkelwe. Ukongeza, i-KICK Ecosystem iya kubhengeza xa i-staking bonus kwi-referral system iya kufumaneka.
Indlela yokufumana amanqaku oMvuzo ($ RP)?
Ukuba umsebenzisi ubhekisela kumntu owenza idiphozithi ye-10% okanye ngaphezulu, umsebenzisi uya kufumana i-5% yokuthunyelwa okugqityiweyo kwaye ukuthunyelwa kuya kufumana ibhonasi ye-$ 20 kwiiNqaku zoMvuzo. Iideshibhodi ezithunyelwayo zibonelela ngolwazi malunga nokudluliselwa, ingeniso, kunye nesixa sisonke samanqaku oMvuzo afunyenweyo njengesiphumo sokudluliselwa.
Malunga ne-Kick Ecosystem
I-Kick Ecosystem yi-crypto-platform ye-crypto-platform enika izisombululo ezintsha ngokupheleleyo kunye nezintsha ze-crypto-market. Iqonga likwazile ukukhuphisana nee-titans zentengiso kwaye libe lelinye lotshintshiselwano oluphezulu lwe-cryptocurrency kwihlabathi ngenxa yenkqubela phambili yalo.
Ngolwazi oluthe vetshe ngeKick Ecosystem, nceda undwendwele indawo ethi website.
Igama Company: Inkqubo yokuKhaba
I-imeyile yeNkampani: [imeyile ikhuselwe]
Inkampani yewebhu: https://kickecosystem.com/
I tilegram: https://t.me/kickico
Inkampani yokuqala yoLawulo lweNkunkuma: I-Agora Tech Labs (ATL) iya kwakha kwiHolochain
Ukuhlaziywa: 28 October 2021
I-Agora Tech Lab (i-ATL) izinikele ekuphuculeni ulawulo lwenkunkuma kwinqanaba lehlabathi ngokusebenzisa i-blockchain ye-leveraging ukusabalalisa iinkqubo zokulawula inkunkuma, apho ukuthatha inxaxheba kwezixeko kuya kuba lula kakhulu. Ngokusebenzisana namashishini asekuhlaleni, iintlawulo zokusetyenziswa kwenkunkuma kubathengi zinokwenziwa ngokukhawuleza nangemirhumo etshiphu kakhulu yentengiselwano.
Inkunkuma, ngoku engomnye wemingeni enzima yehlabathi, kulindeleke ukuba ibe mandundu kule minyaka izayo, apho iBhanki yeHlabathi iqikelela ukukhula kwenkunkuma ngama-70% ngo-2025. kubalulekile ukugcina indalo esingqongileyo uzinzo, ingakumbi kumazwe asaphuhlayo.
I-Blockchain imele ithuba elimangalisayo lokuba le nkqubo ihlaziywe kwaye iguqulwe kakhulu, ngokuvumela amalungu oluntu ukuba alawule, kwaye iqhekeza, izixeko zinokuguqulwa ngokupheleleyo.
Iqela le-Agora Tech Lab's (ATL) liquka abacwangcisi basezidolophini, iingcali zomgaqo-nkqubo, iingcali zetekhnoloji, kunye nababoni abanombono ofanayo:
"Ukwenza izixeko ezinobungqina bexesha elizayo."
I-ATL ifuna ukukhuthaza abantu ukuba baxabise inkunkuma kunye nokuseka uqoqosho olujikelezayo. Singaphuhlisa uqoqosho lwezixhobo zokusebenza ze-cradle-to-cradle ngokusebenzisana nabavelisi bokupakisha, iinkampani zokulahla inkunkuma, phakathi kwamanye amashishini.
Isebenza njani iAgora Tech Labs (ATL).
I-Agora Tech Lab, enekomkhulu e-Rotterdam, e-Netherlands, yinxalenye yenye yezona ndawo zinomtsalane zedolophu kwihlabathi. Ukukhula kwe-Rotterdam, ucwangciso lwedolophu, kunye noyilo lwezakhiwo lubalasele, nto leyo eyenza ukuba ilungele ukuphuhlisa iindlela zolawulo lwenkunkuma ezisebenzayo ukusombulula lo mngeni wehlabathi.
Xa kukho inkuthazo yokuphinda isetyenziswe, njengeethokheni, ukuqokelelwa kwenkunkuma nokurisayikilishwa kuba yintsebenziswano enkulu. Abantu abafumana iithokheni ngokurisayikilishwa banokuzisebenzisa ukuhlawulela iinkonzo zikawonke-wonke okanye bazidibanise ukuze babonelele ngenkxaso-mali kwizenzo eziziingingqi zabo.
Le nkqubo ibandakanya amanyathelo amane asebenzayo kwakhona kwiiprojekthi zolawulo lwedolophu ngokubanzi:
Ukuthuthwa kwenkunkuma kumaziko okurisayikilisha
Ukukhutshwa komvuzo ngamathokheni
Ukusetyenziswa kweToken kwinkonzo yoluntu
I-ATL inomqondiso wayo wendalo osebenza kwi-BSC, kodwa isicwangciso kukwenza utshintsho kwiHolochain kungekudala. I-ATL BEP-20 iya kuhlala njengenye indlela de kufike ixesha lokuqalisa ithokheni yendabuko yaseHolochain.
I-Agora Tech Lab (ATL) iya kuqalisa ukwakha eHolochain ngekota yesine ye-2021 okanye ikota yokuqala ye-2022.
Imigaqo yesiKhokelo ye-Agora Tech Lab (ATL)
I-Decentralized – Indlela esetyenziswa yi-Agora Tech Lab (ATL) ukujongana nemiba emikhulu ikhuthaza ukwenziwa kwezinto. Amaqela asekuhlaleni kunye nabathengi banokusebenzisana ukuze baphinde basebenzise inkunkuma ukuba inkuthazo echanekileyo ibekwe endaweni ngeli xesha kuthotywa izixa zenkunkuma eziveliswa ezidolophini.
Isetyhula - i-ATL ijonge ukubonelela abantu ngokukhuthaza ngoqoqosho lwexabiso lolawulo lwenkunkuma kunye nokuseka uqoqosho lwemithombo ye-cradle-to-cradle ngokusebenzisana nabavelisi bokupakisha, imibutho yokulahla inkunkuma, kunye namanye amashishini ajolise ekujonganeni nenkunkuma.
Ukuvuza - inkunkuma ibalulekile, kwaye ukuze kwenziwe ukurisayikilishwa kuxabiseke kwaye kuyonwabisa, i-ATL ifuna bonke abathathi-nxaxheba bazuze kwinkunkuma ukuya kwikhonkco lexabiso lezibonelelo.
Ngolwazi oluthe vetshe ngeAgora Tech Lab (ATL), nceda undwendwele website.
Igama Company: I-Agora Tech Lab (ATL)
Inkampani yewebhu: https://www.agoratechlab.com/
I tilegram: @ATL_socials
UQhagamshelwano lwe-PR : [imeyile ikhuselwe]
Inethiwekhi yeConceal isungula i-Conceal HUB ukuphela kwe-2021
Ukuhlaziywa: 2 Novemba 2021
I-Coceal Network yibhloko yebhloko ebekwe ngokupheleleyo esebenza kwikhowudi yomthombo ovulekileyo opheleleyo ngaphandle kwabalamli abaqhuba uphazamiseko oluququzelela indawo yobalo lonxibelelwano kunye neentengiselwano zemali.
I-Coceal Hub luphuhliso olulandelayo lwenguquko elandelayo yeNethiwekhi yokuFihla enika indlela yokudibanisa evala zonke iindawo zokuchukumisa ze-ecosystem yomnatha wokuFihla kwisicelo esinye nesilula se-UI. I-Coceal Hub yenzelwe ukubamba iimodyuli ezininzi ezahlukileyo ezisebenza ngokudibeneyo ukuxhasa i-DeFi yabucala yeNethiwekhi kunye nezixhobo zonxibelelwano, kubandakanya iiWallets zamafu, iDiphozithi, iClive, i-ID, iPata, iBridge, i-Explorer, kunye nokunye.
Ngaphezu koko, njengoko amanqaku amatsha ekhutshwa ngokuhamba kwexesha, i-Coceal Hub icwangciswe ukuqhubela phambili ukukhulisa ubumfihlo ngokubonelela ngenkqubo yokuqinisekisa esekwe isitshixo apho abasebenzisi baya kuba nakho ukwenza nokubuyisela iiwallet ngaphandle kweakhawunti yomsebenzisi. Le ndlela iphelisa imfuno yeenkcukacha zokungena komsebenzisi ezifana nedilesi ye-imeyile okanye igama eliyimfihlo. Endaweni yoko, usetyenziso luya kugcina izitshixo zokuqinisekisa kwisixhobo. Usetyenziso luya kufumaneka kwi-Android, iOS, macOS, Windows, kunye neLinux.
Kutheni uFihla iNethiwekhi?
Ukuqaliswa kwe-Conceal Network, i-100% ye-blockchain yangasese, yaqala njengenzame zokuphucula iiseti zabucala ezazingekho njengentsimbi njengoko abasebenzisi bebeya kufuna ukuba babe kukhuseleko olupheleleyo kunye nokungaziwa, okuyimpahla enqabileyo enikwe iziphene kwizinto ezikhoyo. iiseti zabucala.
Indawo ekhokelayo yenethiwekhi yokufihla
Into eyaba luluntu olukhulu yaqala nje njengengxoxo yoontanga malunga neziphene zeeprojekthi ze-cryptocurrency ezingakhange zihlangabezane nemilinganiselo elindelweyo ebandakanyayo, yokwabela amagunya, kunye nobumfihlo. Ngaloo ndlela, ezi zakhiwo zine ezikhokelayo ziqhube isiseko se-Coceal Network: amalungelo obumfihlo, ukubandakanywa koluntu, ukusabalalisa, kunye nokuchasana nokulawulwa.
Imfihlo yeyona nto ingundoqo ekhuselweyo phantsi komthetho wamazwe ngamazwe kwaye iqinisekisa ukuba wonke umntu unelungelo lokukhuselwa kulwaphulo-mthetho olunokuthi lube kho ngurhulumente okanye ngamaqumrhu abucala. Lilungelo elisisiseko ekufuneka linyanzeliswe kuyo yonke indawo, ngakumbi kwi-blockchain, ebeka i-premium ekuhleni, ukungaziwa, kunye nolawulo olupheleleyo ngumsebenzisi.
Ukubandakanywa koluntu ngumqobo ojongene necandelo lezemali lemveli apho ucalulo lwabantu ngabanye lubenza bangakwazi ukubonelelwa ngeenkonzo zemali. Olu lucalucalulo lujoliswe kubantu abafumana imivuzo ephantsi, kwaye kulapho i-blockchain iguqula umdlalo. Ngokusebenzisa iinkqubo ezisasazwa nge-cryptographic, abantu baya kukwazi ukuqhuba imicimbi yabo yebhanki kwi-blockchain ngokupheleleyo. Ngaphandle kokuba nemirhumo yentengiselwano efikelelekayo, abasebenzisi beNethiwekhi yokuZifihla baya kubonelelwa ngenqaku lokonga, elinokuthi libe nefuthe elibonakalayo kubume babo bezemali.
Ukwabela amagunya yindawo ekhuselekileyo yabantu abahlala kumazwe asakhasayo. Abantu ebebekhe bahlala kumazwe azinzileyo natyebileyo bayayixhasa inkqubo esembindini, kodwa loo nto inokutshintsha ngokukhawuleza ukuba imeko ingatshintshwa. Kumazwe asakhasayo nangazinzanga kakhulu asemfazweni, ukutshatyalaliswa kwenkqubo yezemali esembindini kubonisa umgibe ekunzima kakhulu ukuwubaleka, kwaye nakwimiba yobomi okanye yokufa, amathuba okubaleka mancinci. Ngoko ke, inkqubo yokwabela amagunya engaxhomekekanga kwinkqubo yezemali yesizwe, yemveli, neyendawo esembindini inokuba ngumahluko ngokoqobo phakathi kokufa nobomi.
Ukuchasa uqwalaselo kuthetha inkululeko yokuthatha inxaxheba ngokungakhethi cala kwinkqubo yokwabela amagunya, okuthetha ukuba nokuba zeziphi iimpawu zomntu ezichongayo, banokuchitha umvuzo wabo ngendlela abanqwenela ngayo ngaphandle kokongamela, ukuvunywa, okanye ukucalula. Lo mgaqo ubalulekile kuba akukho gunya liphakathi linokuthi livavanye abathabathi-nxaxheba ngolawulo okanye ngokunyanzeliswa okanye nayiphi na enye indlela yokuphonononga kunye nokongamela.
Fihla Iimpawu zeNethiwekhi
Ezona mpawu ziphambili ze-Conceal zezi:
UKhuseleko lwaBucala - iintlawulo ezingaziwa ngokupheleleyo ngokusebenzisa iisignesha zamakhonkco kunye needilesi ze-stealth zexesha elinye.
Ukungafumaneki – intengiselwano ayinakudityaniswa phakathi kommkeli kunye nomthumeli.
Ukumiselwa kwamalungelo – imali yedijithali ekhuselekileyo esetyenziswa nguthungelwano lomsebenzisi ongafuni gunya liphakathi.
Ukonakala -I-Conceal ineempawu zabucala ezakhelwe ngaphakathi. Ukongeza, ukuba nokwenzeka kokuba ingqekembe yemali ifakwe kuluhlu olumnyama akukho nto ikhoyo kuba zonke iingqekembe ziyatshintsha kwaye ziyalingana.
Ukusabalala - i-blockchain ye-Conceal ine-DBSM - i-Dynamic Block Size Mechanism enokunyusa ngokusetyenziswa okuphezulu ukuxhasa inani elikhulu leentengiselwano njengoko ukwanda kwazo rhoqo.
Ukuqhutywa kwabahlali -Ukufihla akunamnini omnye, kwaye wonke umntu unokuthatha inxaxheba. Inkxaso-mali kunye nophuhliso lwe-Conceal yeyokuzithandela kuphela ukubonelela ngemfihlo epheleleyo kunye nenkululeko kunye nenkululeko kubasebenzisi.
I-PoW ekhuselweyo -Ubungqina bomsebenzi we-hash usekwe kwi-CPU elinganayo kunye nemigodi ye-GPU kunye ne-ASIC Resistance.
Umyalezo Ofihliweyo -Inethiwekhi efihliweyo ye-P2P, unxibelelwano olukhuselekileyo, kunye nemiyalezo ezonakalisayo efihliweyo iqinisekisa imfihlo epheleleyo yonxibelelwano.
Iidiphozithi ezinatyisiweyo -IiDipozithi zeNzala eMiselweyo eMiselweyo kusetyenziswa iCold Staking kunye neekhontrakthi zeHTLC zihlawula ukuya kuthi ga kwi-6% yenzala.
Fihla ibhulorho -Utshintshiselwano lwe-asethi enqamlezayo / iqonga lokutshintsha.
Fihla isazisi -Iziqhulo zeBlockchain endaweni yeedilesi ezinde.
Fihla Intlawulo – Inkqubo yentlawulo engaziwa ngoko nangoko kubarhwebi.
Fihla Live (Clive) -P2P kunye ne-E2E yomsindo kunye neefowuni zevidiyo.
I-$ CCX, i-Conceal Network yenkozo yemveli yakhiwe kwi-Cryptonote protocol kwaye iqhuba iteknoloji yenethiwekhi yontanga-to-peer ekhuselekileyo enikezelwa. Abasebenzisi banolawulo olupheleleyo lwezitshixo zabucala kwiimali zabo.
I-$ wCCX ifumaneka kwi-Ethereum Blockchain kunye ne-Binance Smart Chain, kunye nePolygon. I-CCX ngoku irhweba kwi-BitMart, i-STEX, i-HotBit, kunye ne-TradeOgre.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neNethiwekhi yokuFihla nceda undwendwele i website.
Igama Company: NONE
Inkampani yewebhu: https://conceal.network/
I tilegram: https://t.me/concealnetworkusers
I-ArGoApp-UkuTshintsha iNethiwekhi yokuGcina ngamaNxweme asemthethweni kunye nokuHamba
I-intanethi ubukhulu becala igxile kwinkqubo yendalo ephantsi kolawulo loorhulumente kunye neenkampani zobuchwephesha. Nangona kunjalo, ngokuziswa kwe-cryptocurrensets kunye nezisombululo ezisekwe kwi-blockchain kumashishini ohlukeneyo, iteknoloji ye-blockchain ibonakalise ukuba inguquko ekwandiseni ukungafihli kulwabiwo-magunya.
Ngokwazisa ngokusingathwa kwewebhu okwabelweyo, iteknoloji ye-blockchain ibonakalise amandla okuphazamisa eli shishini. Njengenye yeenkqubo zokuqala zokusingathwa kwe-intanethi kunye neeplatifti zokugcina ezakhiwe kuthungelwano lwamafu olusasazekileyo, iProtocol yeArGoApp ikhokelela kwindlela.
I-ArGoApp yindlela esekwe kwilifu kumaqonga asembindini wokubamba amafu alawula ishishini lokubamba iwebhu kunye nokuhlawulisa umrhumo omkhulu wobhaliso. Nabani na onokukhulisa kwaye ahambise izimvo zabo kwiArGoApp ngaphandle koloyiko lwendawo yabo okanye usetyenziso oluya kuthathwa yiarhente esembindini okanye urhulumente.
Isakhelo se-ArGoApp sigxile ekudibaniseni ukwabiwa kwabasemagunyeni kunye nasekuthembekeni kwetekhnoloji ye-blockchain ngoncedo lokwenza iphepha lewebhu ngeWordPress okanye abakhi bemixholo efanayo. Ngokucofa nje iqhosha, abasebenzisi abanolwazi oluncinci lobuchwephesha banokuhambisa iphepha labo lewebhu kunye neeapps ngaphandle kolawulo.
I-ArGoApp ibonelela ngokulula nangokucacileyo kokujongana nomsebenzisi nakuphi na ukuthunyelwa kwiProtocol yeArweave, evumela abathengi kunye nabaphuhlisi abangaqhelekanga kubuchwephesha be-blockchain ukuba bangene kwikamva lewebhu kunye nokusingathwa kweapp. I-ArGoApp isebenza ngezakhelo zeJamstack, kwaye abasebenzisi banokukhetha phakathi kweenkqubo zokugcina ezithandwayo ezinje ngeArweave, iSkynet, kunye ne-IPFS, phakathi kwabanye.
Inkqubo ye-ArGoApp ecosystem
Ukusukela ekuqaleni kwayo, iArGoApp igcine izithembiso zayo kunye nemephu yendlela. Inani lezicelo ezisungulwe kwiiseva zalo zewebhu ziphindwe kabini ukusukela ngo-Agasti, njengoko uninzi lwabaphuhlisi lufuna ukusebenzisa amandla alo awodwa. Iqonga lokusingathwa kwewebhu kwiArGoApp ngoku linayo Iiprojekthi ezingama-259 kunye no-1926 abasebenzisi ebhodini.
Emuva ngo-Epreli, inkampani yokusingathwa kwewebhu yabambisa i-1.3 yezigidi zeedola kwimbewu yenkxaso mali. I-Arweave, i-1kx, ii-Ascensiveassets, i-OnChain Capital, i-Master Ventures, njl.
Iqela le-ArGoApp liphumelele i-Near First India inkqubo yokukhawulezisa kwaye liza kufumana isibonelelo esivela kufutshane neSiseko.
Ngaphandle kokubandakanya i-Arweave kunye ne-Skynet, i-Namebase, umbhalisi we-domain owabelweyo owakhelwe kwi-Handshake blockchain, kunye ne-ArGoApp ikwabhengeze ubuhlakani bobuchule. Abasebenzisi abayi kuba nakho ukuba ngabanini beedomain kuphela kodwa baya kwakha iwebhusayithi yewebhu.
I-ArGoApp yongeze amandla amatsha enza ukuba kube lula kubaphuhlisi ukudibanisa izisombululo zabo kwii -apps zabo zewebhu. Abasebenzisi banokumema abasebenzisana nabo okanye abantu besithathu ukuba basebenzise iArGoApp ukuhambisa iiapps okanye ukulawula iiakhawunti zabo.
I-ArGoApp ikwasungule kwaye yadibanisa ithokheni yayo yemveli ye-ArGoApp (ARGO) kwi-testnet yayo, apho konke ukuthunyelwa kuyo nayiphi na iprotocol inokuhlawulwa ngophawu.
Lisigcinele Ntoni Ikamva?
I-ArGoApp ijonge ukubonelela abasebenzisi ngamava ophuhliso olupheleleyo oluya kubandakanya ukubanakho ukuhambisa zombini iifayile ezi-static kunye namandla kunye namaphepha ewebhu. Olunye ugcino kunye neenkqubo zokubala zekhomputha ziya kudityaniswa ngokunjalo. Abasebenzisi baya kuba nakho ukuphucula inkqubo yabo yophuhliso ngokufikelela kwizixhobo ezinje ngokufumaneka ngokulula kusetyenziso olusebenzayo kwaye babe nakho ukusebenzisa inkqubo yokutsala kunye nokwehla ekusebenziseni iiapps ezakhiweyo nezikhutshiweyo.
Izicwangciso zeArGoApp zikwabandakanya ukuphuhliswa kwendawo yentengiso echongiweyo kwiimveliso zayo zeDApps kunye neenkqubo zokwakha ezakhelweyo.
Ngolwazi oluthe kratya kwiArGoApp, ndwendwela i- website.
Igama Company: IArGoApp
Inkampani yewebhu: https://argoapp.net/
I tilegram: https://t.me/argoofficial
tune.fm: Ubuvulindlela kuHlaziyo lweShishini loMculo
Tune.fm Yinethiwekhi yomculo eyabelweyo evumela iimvumi ukuba zenze inzuzo ngokuthe ngqo kubaphulaphuli bazo ngokusebenzisa ii-micropayments, ii-NFTs, kunye neziganeko zexesha lokwenyani.
Tune.fmUmqondo owaphula umhlaba unceda iimvumi ukuba zonyuse ingeniso yazo ngokubavumela ukuba bazuze ngokuthe ngqo kubaphulaphuli babo.
Ithokheni ye-JAM yemveli yeTune.fm imele imali yelizwe jikelele eguqule ngokunyanisekileyo ishishini lomculo. Iithokheni zeJAM zinika bobabini amagcisa kunye nabalandeli ithuba lokufumanisa, ukusasaza nokwenza umculo omtsha ngaphakathi kweqonga, ngenxa yoko, ukuququzelela ukudalwa koluntu oluhlangeneyo.
Amagcisa kunye nabalandeli banokurhweba iiNFTs ezinqabileyo kwimidlalo yeaudio ephilayo, umxholo okhethekileyo, kunye nokukhutshwa koncwadi olunomda. Uqoqosho lomculo wehlabathi kwiTune.FM ixhotyiswe ngumqondiso weJAM, iasethi yokuqala yeHedera Token Service (HTS) eya kuthengiswa kutshintshiselwano, iBitrue.
I-Hedera njengevulindlela yenethiwekhi yoluntu egunyazisiweyo yenza ukuba abaphuhlisi bayile ii -apps ezikhuselekileyo nezibandakanya konke ezigqityiweyo ngexesha lokwenyani.
Inani leempawu ze-HBAR zidluliselwa kwiithokheni ezikhutshwe kusetyenziswa i-HTS, kubandakanya amawaka eentengiselwano ngomzuzwana ngemali encinci kunye nolawulo oluphezulu, ukongeza kwisivumelwano se-ABFT. Abasebenzisi abaneakhawunti yeHedera banokufikelela kwiiasethi ezikhutshwe nguHedera, ezinjengeengqekembe ezinzileyo kunye neethokheni zokhuseleko.
Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iHedera website.
Nge-HTS kunye namandla eHedera, amawaka eetune.fm amagcisa anokufumana iithokheni zeJAM umzuzwana ngamnye umculo wabo udlalwayo owenza ukuba ube lithuba elinengeniso.
I tilegram: https://t.me/tunefm
I tilegram: https://t.me/hederahashgraph
ICashio -Ukuhlaziya indawo yoLonwabo ye-Crypto Realm
Ukuhlaziywa: 2 October 2021
Ngokugcina iiTokeni zeCashio, unokuba nenxalenye yeCasino kwaye uzuze kwimivuzo yayo!
Ikheshi luphawu olutsha olunokusetyenziswa-kwimeko ekhethekileyo ebaleka kwiBinance Smart Chain. Ngaphandle kokunikezela ubunini obukhethekileyo kubasebenzisi abathembekileyo, iCashio iyazingca ngenkqubo yomvuzo ogqwesileyo.
Injongo kaCashio kukuqinisekisa ukukhula kwexesha elide ngokuvumela abatyali mali bazive bezithembile kwizigqibo zabo zotyalo-mali kunye nokuvuza abo banomdla ngokuzinikela kwabo kwindalo.
ICashio liphupha elitsha kubathandi bekhasino, ukubonelela ngekhasino yokuqala ye-blockchain eza neziganeko ezininzi ezinomdla. I-Cashio yakha i-kasino enikezelweyo esecaleni eya kuthi ivumele abasebenzisi bayo ukuba bafumane kwi-Cashio token ngelixa ikwabonelela ngemidlalo eyenzelwe abasebenzisi kunye namava ahlukileyo.
ICashio ikwanayo neSatifikethi seSolidProof kwimigangatho yokhuseleko yeAAA kwizivumelwano zayo ezifanelekileyo.
Ityala lokuSebenzisaAbanini beCashio Token bavuzwa nge-60% yemali yekhasino kwi-BNB.
Inkqubo yokuBuya: Inkqubo ethenga i-10% yentengiso enkulu kune-0.05% yonikezelo lulonke.
Ukuhanjiswa kweBNB: Ukusuka kwintengiso yeCashio, i-7,77% yenzuzo ihanjiswa kubanini be-BNB.
UCashio Token wakha i-cryptocurrency yekhasino eyabelwe imali engagungqiyo ngokudibanisa amashishini emidlalo kunye neecryptocurrency, enika abatyali mali ithuba lokuba babambe isiqwenga semali yekhasino njengoko amaxabiso ethoksi enyuka ngenxa yokunyuka kwemfuno. Ikhasino ecekeceke iya kuhambisa inzuzo eseleyo kubanini beMiqondiso ngelixa beqokelela isixa esikhulu semvumelwano yeCashio yeJackpot.
Ikhontrakthi yeJackpot iya kuqokelela i-BNB kwimali engenayo yekhasino kunye neefizi zentengiselwano ukuze zisebenze njengelothari. Ophumelele ilotto uza kukhethwa ngokufumana itikiti lelotto elinethamsanqa eliza kuba neenzuzo kubaninimzi kwangaxeshanye ngokunyuka ixabiso.
Iqela leCashio lakha imidlalo emitsha eyahlulahlula iCasino kwaye ibandakanye zonke iiCrypto-Gamers. ICasino iya kuba yeyokuqala ukudibanisa umdlalo kunye neeNFTs, ngaloo ndlela yenze indawo yenkqubela phambili ngakumbi njengoko iprojekthi isanda. Uluntu lwaseCashio luya kuvota kumdlalo olandelayo oza kwaziswa kwiCasino, enokuthi ibe yindawo yokubeka, idayisi, kunye nokumbiwa kwemigodi phakathi kweminye imidlalo ezayo.
Ukuwongwa kwabanini bekhontrakthi kunye nepesenti ebalulekileyo yentengiso nganye ebuyiswayo inxulunyaniswa nesiqinisekiso esibonelelwa yinkqubo yokubuyela umva. Oku kuyonyusa ichibi lokuhlawula amatyala, ukwehlisa ukunyuka kwamaxabiso kunye nokuphela kwethokheni etshisiweyo.
ICashio inendlela yokuhambisa intsimbi enxibe isinyithi nalapho ngamaxesha exabiso eliphantsi lemarike iqinisekisa ukuhanjiswa kwemivuzo kubanini. Iibhonasi ezongezelelweyo ezifumana umvuzo kwiCashio zinikezelwa kubaphathi abaphezulu bethokheni yeCashio.
Umvuzo osekwe ekubanjweni ubangelwe kukusetyenziswa kwenkqubo yamanqanaba amathathu eCashio. Eli ziko lokugcina amatyala liza kuxhaswa ngemali yentlawulo kunye neenzuzo zekhasino.
Ulwazi olubalulekileyo kunye namabango emivuzo aya kufumaneka kubasebenzisi ngeDashboard yokuFumana.
UCashio usandula ukwazisa iwebhusayithi yedemo yemidlalo, apho imidlalo, idashboard yomvuzo, kunye nemivuzo inokulandelwa Apha.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nenkqubo yokuhambisa kunye nenkqubo yenqanaba, jonga kwiCashio's mhlophe.
Igama Company: Ikheshi
Inkampani yewebhu: https://cashio.io/
I tilegram: https://t.me/CashioToken
I-CYCE-Umqondiso oTshintsha uMdlalo oKhokelela kwiMpembelelo yeHlabathi
Ukuchukumisa isiseko nge Amagama omnxeba we CYCE, ithokheni yokwaphula umthetho ye-ERC-20 eya kuthi iguqule indlela esicinga ngayo malunga ne-cryptocurrency. Lishishini laseTurkey leCrypto Carbon Energy's yokuqala inyathelo le-blockchain, kodwa kuye kwinqanaba eliphezulu.
Ngenjongo yokulwa noTshintsho lwemozulu yeHlabathi, i-CYCE ifuna ukwenza inguqu kumandla ahlaziyekayo ukusuka kwimfuneko ukuya kwinqanaba elinqwenelekayo nelinoqoqosho.
I-CYCE ijolise kutshintsho lwemozulu lwehlabathi kwizizukulwana ezizayo ngelixa inegalelo elikhulu kuzinzo lomhlaba.
Eyona nto kugxilwe kuyo yi-CYCE kukusebenzisa itekhnoloji ye-blockchain ukunciphisa ukuxhomekeka kwizibaso ngelixa kusandiswa ukubaluleka kwamandla ahlaziyekayo.
Nantsi indlela i-CYCE eya kuyenza ngayo i-GCC
Akunakuphikwa ukuba utshintsho lwemozulu lunoluhlu olubanzi lweempembelelo ezandayo kwinqanaba lehlabathi. Kananjalo, injongo ye-CYCE ayiphazamisi indawo esekwe kwangaphambili ye-blockchain ngelixa iphakamisa umdla kumandla ahlaziyekayo ukunciphisa ukuxhomekeka kwe-fossil fuel.
Ubuzaza bokulwa notshintsho lwemozulu lwehlabathi, kunye nesidingo sokukhokela iiprojekthi ezijolise ekuvuseleleni, kuyanda, ngokweCYCE. Ngenxa yoko, le projekthi ibalulekile kubameli be-crypto kunye ne-eco-lifestyle kuba ichanekile ukuyisebenzisa kwaye ivulekele ukujongwa.
“I-Crypto kunye ne-blockchain technology zilunge kakhulu ekuphuhliseni isisombululo kwingxaki echaphazela lonke uluntu. Ngelixa kuguqulwa iiasethi zabo zibe yi-crypto, bonke abantu abazizityebi, iinkampani, iimali kunye neebhanki eziphambili ziya kuba yinxalenye yokusombulula ezona ngxaki zibalulekileyo emhlabeni njengokufudumala komhlaba kunye nokukhutshwa kwekhabhoni. ”
UHasan Karaozan-CEO yeCYCE
Xa uMzi-mveliso waMandla aVuselelekayo ubhalisiwe kulo naliphi na iqonga, kuyenziwa iCYCE EWE IPHEPHA-MVUME, elinokujongwa kwiwebhusayithi esemthethweni. Inkqubo yamkela umbane ophehlwa ngamanzi, umoya, ilanga, i-biomass, i-geothermal, kunye ne-wave-wave wave generating.
EWE kule nkqubo inentsingiselo ethile. NgesiTurkey, u-YES umele uYenilenebilir Enerji Santrali, okuthetha ukuthi "Umzi-mveliso waMandla ahlaziyekayo." Ikwamele umbono weprojekthi xa iqinisekisa u "ewe" kwihlabathi apho imithombo yamandla ehlaziyekayo ininzi.
Ukuphucula ixabiso labo kunye nokwenza inkuthazo yokwandisa ukusetyenziswa kwamandla ahlaziyekayo, i-CYCE ijonge ukunika i-80% yamathokheni ayo kwizityalo zamandla ahlaziyekayo kunye namaziko asele esebenza okanye aza kusebenza kule minyaka ingama-30 izayo njengebhaso lokukhuthaza umhlaba uzinzo. Ngenxa yoko, i-CYCE ifuna ukukhulisa amandla ohlaziyo lwamandla kunye nezimali.
Ngokusebenzisa i-20% eseleyo yonikezelo ukugcina umbutho weprojekthi, uphuculo, uzinzo kunye nokuseka izityalo zamandla e-biomass, i-CYCE iya kuqala intshukumo yotshintsho ngokuchasene nobushushu behlabathi.
Ungaba njani yinxalenye yeCYCE?
Ukujoyina intshukumo ye-Eco-Crypto, kuya kufuneka uthenge ithokheni yeCYCE, eyimali ephambili yeprojekthi. I-CYCE inokuthengwa ngqo kwi-BigONE exchange.
Emva koluhlu lwayo kwi-BigONE, i-CYCE ngoku ikwi-COINSBIT, kwi-European Exchange
I-asethi yeCYCE Crypto luphawu kwiziseko zophuhliso ze-Ethereum Blockchain, ezenziwe ngemigangatho ye-ERC-20. Injongo yokuyilwa kwayo kukulwa utshintsho lwemozulu lwehlabathi, eyona ngxaki inkulu kwilizwe lethu.
Ukulandela uluhlu lwayo lokuqala nge-13.08.2021 kwi-BigONE Exchange, i-CYCE ifanelwe indawo yayo eCoinMarketCap naseCoingecko kwiveki enye kwaye yenze ikepusi yentengiso.
Ukuqala nge-1.1 USD, yenyuka yaya kuthi ga kwi-1.75 USD. Ukurhweba kweCYCE ngevolumu ye-24 / h phakathi kwe-500,000 USD kunye ne-1,000,000 USD. Inani elijikelezayo le-CYCE yi-6,901,971.
Ngelixa uthethathethwano lusaqhubeka notshintshiselwano lwasekhaya kunye nolwehlabathi, i-CYCE yafikelela kwisivumelwano kunye nangaphezulu kwe-10 yotshintshiselwano lwehlabathi. Ukulandela imisebenzi yeziseko zophuhliso, iinkqubo zokudwelisa ziya kugqitywa kwaye zibhengezwe ngamajelo onxibelelwano.
Ifumaneka eSeychelles, iCoinsbit inomthamo wokuthengisa wemihla ngemihla ngaphezulu kwe-500,000 yeedola ngokweCoinMarketCap kunye neCoingecko. I-Coinsbit ivumela urhwebo nge-USD kunye ne-EURO kwaye inabasebenzisi abangaphezulu kwe-2,000,000 ngeveki.
Indawo yewebhu yeProjekthi: www. www
Iprojekthi yeWhitepaper TR: https://cycecoin.com/cyce-whitepaper-tr.pdf
Iprojekthi yeWhitepaper EN: https://cycecoin.com/cyce-whitepaper-en.pdf
Isishwankathelo seProjekthi Jikelele yeVidiyo TR: https://youtu.be/IbrYyAoRwZ0
Isishwankathelo seProjekthi Jikelele yeVidiyo EN: https://youtu.be/UTFqO2fcYmI
Idilesi yeCoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/tr/currencies/crypto-carbon-energy/
CoinGecko Idilesi: https://www.coingecko.com/tr/coins/crypto-carbon-energy
Idilesi yoTshintshiselwano enkulu https://big.one/cn/trade/CYCE-USDT
I tilegram: https://t.me/cryptocarbonenergy
I-CryptoGames: Abadlali beplatifomu abanomvuzo nge-BTC kunye ne-ETH Jackpots
I-CrystalGames, iqonga lokuguqula ukungcakaza kwe-crypto, lelinye lamaqonga aphambili kushishino lokungcakaza kwi-intanethi. Kuba igubungela eyona midlalo yokungcakaza inje ngeDayisi, iLottery, iBlackjack, iSlot, kunye nePoker, i-CryptoGames yeyona webhusayithi ikhethiweyo yabantu abenza ukungcakaza kunye ne-crypto.
Ukubhalisa, konke okudingayo isiteketiso kunye ne-imeyile eqinisekisiweyo kwaye ukulungele ukuya. Yazi uMthengi wakho (i-KYC) akanyanzelekanga, nangona kunjalo, iyafuneka kwimicimbi emikhulu kunye nezibonelelo ezithile.
Enye yeempawu ezenza ukuba i-CryptoGame ihanjwe rhoqo ziiJackpots zazo eziphezulu. Njengazo zonke iintlawulo, iiJackpots zivuzwa nge-cryptocurrency. IJackpot yangoku yeDayisi kunye neRoulette inokuvuzwa ngeBitcoin (BTC), i-Ethereum (i-ETH), iDash (iDASH), iDogecoin (iDOGE), iLitecoin (i-LTC), iMonero (i-XMR), i-Ethereum Classic (i-ETC), i-Bitcoin Cash ( BCH), kunye neGesi (GAS).
Ingxaki kwiikhasino ezikwi-Intanethi kukuthenjwa kwabo okuphantsi. Abantu badla ngokuqhathwa rhoqo xa besebenzisa amaqonga ongcakazo kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, iiCryptoGames zikwinqanaba elahlukileyo ngokupheleleyo. Ukuba yi-RNG Certified, i-CryptoGames iqinisekisa abasebenzisi bayo ukuba lonke ulandelelwano lwamanani lwenziweyo alwenziwanga kwaye alusetwanga.
Ukuza kuthi ga ngoku, i-jackpot ephakathi evuzwayo yi- $ 96,000. Ukuchaneka ngakumbi, iJackpot yangoku yeDayisi kunye neRoulette imi ngolu hlobo lulandelayo:
Xa kuthelekiswa nomnye nomnye, eyona jackpot iphezulu kwezi zikhankanyiweyo kukuba unomvuzo njenge-Ethereum, ixabisa ngaphezulu kwe- $ 260,000 (1 ETH = $ 3,400). Ngokuchasene noko, eyona jackpot isezantsi yeyona inomvuzo njengeGesi, exabisa malunga ne- $ 1,500 (1 GAS = $ 9.9).
Inkampani: MuchGaming BV
Uqhagamshelwano: Intambo yeBitcointalk esemthethweni
Ukwazisa iMilestones eziMangalisayo zeMetrix Coin
Imali yokutshintsha Metrix ngaphakathi (MRX) bubungqina be-Stake (PoS) yedijithali yemali enezibonelelo ezahlukeneyo kumashishini nakubathengi. Iyaqhekeka, iyabhetyebhetye, kwaye iyasetyenziswa kwiimeko ezininzi zokusetyenziswa.
Sele sizinzile njengeqela elisebenza nzima elinamabhongo okwephula umhlaba kunye nezakhono zokulibona, iMetrix iyaqala.
Izinto ezinkulu ngakumbi kunye nemveliso ethembisayo ziya kusiwa kwiiveki nakwiinyanga ezizayo. Umdlalo weWage Street, onikwe amandla yi-MRX kwaye uvumela abadlali kunye nababukeli ukuba babheje kwimidlalo ye-PvP nakwi-Esports, yenye yezona zinto zibalulekileyo. Ukongezwa kwe-BSC kunye ne-ETH esongelayo yokuququzelela ukutshintshwa kwe-MRX kwiPancake kunye ne-UNI kuya kunyusa kakhulu ukuthengiswa kwemali.
Ukwenza ukutshintshiselana nge-MRX kube lula kubasebenzisi, iqonga leNFT kunye "needilesi ezimfutshane" ziyasebenza.
Ukufezekisa ibango elilindelekileyo le-MRX, iqela lifake isicelo kutshintshiselwano oluphezulu lwe-15, enye yazo sele igunyazisiwe kwaye ilindele isibhengezo esisemthethweni.
Ukongeza ekukhululweni kwiPancakeSwap kunye neUniSwap, i-MRX isandula ukwaziswa kwi-Infinity Wallet.
Ngalo lonke olu phuculo kunye nokunye okuzayo, ukunyuka kwe-100 X ye-MRX kulindeleke ukuba yenzeke kwiinyanga ezizayo.
Nantsi into ethe yathethwa zii-Influencers ze-crypto malunga neMetrix Coin kwezi veki zimbalwa zidlulileyo zodwa!
Uluhlu olude lwezinto ezigqityiweyo ezigqityiweyo, kunye nezibhengezo ezizayo, sisimboli sobunye beMetrix Coin, ebonisa iqela elizinikeleyo, elingoyikiyo, uluntu oluthembekileyo, kunye nenjongo eza kwenziwa. Ixesha elizayo yiMetrix!
Ngolwazi oluthe kratya, funda iMetrix Coin (MRX) iphepha elimhlophe.
Igama Company: Imali yokutshintsha Metrix ngaphakathi
Inkampani yewebhusayithi: https://www.metrixcoin.com/
I tilegram: https://t.me/officialmetrixcoin